Mwenje wemugodhi wemwenje yekudyira chandelier Mugadziri, Fekitori, Wholesale - Zvigadzirwa - Dongguan Yisheng Electric Co, Ltd.
Imba > Chandelier yekudyira > Aluminium yekudyira imba chandelier > Mwenje wemugodhi wemwenje yekudyira chandelier
Mwenje wemugodhi wemwenje yekudyira chandelier
1a Retro aruminiyamu mwenje wekubata, uye chimwe-chidimbu kufa-kukanda mwenje wemwenje, zvikamu zviviri dhizaini dhizaini, nyore kuunganidza.
Chikamu chemukati chemuviri wemwenje chinoita kuti chinobata mwenje chigadzirise moto uye chengeteke.
3ã nzira yekubatanidza: Zvinoenderana nenzvimbo yekushandisa, sarudza tambo refu kana yakatenderera siringi. Pane zvakawanda zvakasanganiswa, uye iwe unogona zvakare kuronga nekubatanidza wega.
Hot Tags: Mwenje wemugodhi wemba yekudyira chandelier Mugadziri, fekitori, Wholesale